Axmed: Waxaa iga go'an inaan dalkeyga ka shaqeysto oo aan tahriib dambe gelin
Photo | Axmed oo seyladda Afgooye xoolo ku iibinaya /Maxamed Cabdi/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 01 February, 2016 AFGOOYE
(ERGO) - Axmed Muuse Cumar waa 24 jir. Shan sano ka hor, markii uu go'aansaday inuu u tahriibo Sacuudiga, wuxuu niyadda ku hayay inuu halkaas ka heli doono shaqo, nolol wanaagsan iyo nabadgelyo. Wuxuu ku taamayay inuu safarkaas u noqon doono fursad uu ku dhiso mustaqbalkiisa, uuna ku caawin karo hooyadiis oo ku soo korisay khudaarta oo ay xamaali jirtay tan iyo yaraantiisii iyo saddex carruur ah oo la dhalatay.
Isagoo 13 jir ah ayuu seyladda xoolaha Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ka billaabay shaqo. Wuxuu noqday xarigle – qof xoolaha la kala iibsado u kaxeeya dadka. Axmed wuxuu markii dambe go`aansaday inuu tahriibo oo siduu ku fekerayay shaqo taas dhaanta uu helo, kaddibna doon ayuu Yemen ku tegay, isagoo Sacuudiga si sharci-darro ah ku galay 2009. Wuxuu rinjiyoole ka noqday meel lagu farsameeyo ganjeellooyinka. Laakiin siddeed bil ka hor ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya. Wuu guursaday, wuxuuna go’aansaday in uu dalkiisa ka shaqeysto oo mar dambe uusan tahriibin.
Weriyaha Ergo ee Afgooye ayaa la kulmay Axmed, wuxuuna weydiiyay:
Ergo: Maxaa beddelay aragtidaada oo aad u go’aansatay in aadan mar dambe tahriibin?
Axmed: Dalkeyga ayaa ii fiican, sababtoo ah waan ku hungoobay noloshii aan raadinayay ee darteed aan u tahriibay. Hadda waxaan ahay nin waddankiisa ka shaqeysta oo ka ganacsada xoolaha. Waan ku qanacsanahay shaqadeyda, nolosheydana waan ku filanahay. Intii aan Sacuudiga joogay waxaan ogaaday in ay xornimada wax weyn tahay. Halkan, xaggee baad ka timid iyo xaggee baad u socotaa? cid ku waydiinaysa ma laha. Markii aan Sacuudiga joogay cabsi ayaan ku noolaa, waayo sharci ma lahayn, waxaana ka cabsan jiray in la i xiro. Hadda wixii ka dambeeya waxaa iga go’an inaan dalkeyga ka shaqeysto.
Ergo: Sideed ugu soo laabatay Afgooye?
Axmed: Sacuudiga noloshii aan ku riyoonayay kama helin. Sharci ma haysan. Maalin anigoo shaqadeyda u socda ayaa la i soo qabtay. Waxaan xirnaa saddex maalin kaddibna Soomaaliya ayaa la igu soo celiyay. Xirfaddii aan aqaannay ee iibinta xoolaha ayaan dib ugu noqday. Ariga ayaan ka keenaa deegaanka Daafeed ee Shabeellaha hoose. Maalmaha Sabtida, Isniinta iyo Arbacada ayaan seyladda Afgooye keenaa oo aan sii iibiyaa xoolaha. Maalinta aan shaqeeyo ugu yaraan waxaan iibiyaa 4 ilaa 5 neef waxaana ka helaa $50 ilaa $55.
Ergo: Maxaa kugu kallifay inaad tahriibto?
Axmed: Shaqadii aan markaas haystay ilama ahayn inay u qalanto waqtigeyga. Waxaan iska dhaadhiciyay haddii aan tahriibo inaan heli karo shaqo taas ka fiican. Hooyo ayaa igu caawisay oo ayadaba iska duruufeysan oo dusheeda ku xamaalata, kana shaqeysata khudaarta, inta kalena xoogaa aan ka helay seyladda Afgooye oo aan xarigle ka ahaa ayaan ku darsaday.
Ergo: Maxaad kula talin lahayd dhallinyarada dooneysa inay tahriibto?
Ahmed: Raaxo iyo rafaadba inaan waddankeenna joogno ayaa noo fiican. Waxaan walaalahay kula talin lahaa inay dalkooda shaqo ka raadsadaan, kuna kalsoonaadaan. Meel walba dalkeenna shaqo way taallaa, waxyaabo badan baad qaban kartaa, oo ganacsiyo ayaad abuuran kartaa.
Maryan Mursal oo ka sheekeynaysa qisada ka dambeysa mid kamid ah heesaheeda
Nin burco ka waayay kabo la eg oo Hargeysa u doontay
Arday dhigta dugsiga sare ee Burtinle oo sameeyo sawirrada gacanta